Ezokusubatha Archives - Impempe
UNgcobo uphule irekhodi kwiHarry Gwala Marathon
May 16, 2022 Impempe.com
Alfred Ngubane U-Ayanda Ngcobo waseMsinga uphule irekhodi leHarry Gwala Marathon lika-42.2km, enza isikhathi esingu-2:18.14 kulo mjaho ngeSonto. Leli rekhodi beliphethwe uNdumiso Sokhela owenze u-2:19.52 ngo-2020. Laba basubathi bangene belandelana eduze kakhulu kulo mjaho ngeSonto, kanti […]
Leave a commentEzokusubatha
UKunene ufihle induku emqubeni, uza nesimanga kwiHarry Gwala Marathon
May 11, 2022 May 10, 2022 Impempe.com
Alfred Ngubane UMthandeni Kunene ocija abasubathi adlondlobala ngokushesha eMgungundlovu, aphinde abe ngumhlaziyi wezokusubatha emsakazweni Ukhozi FM, uthi abalandeli bazobona abangakwazi kwiHarry Gwala Marathon. Lo mqeqeshi utshele Impempe ukuthi uthukuse induku emqubeni ngomunye wabasubathi besimame onohlonze […]
Leave a commentEzakamuva, Ezokusubatha
UMtolo uzowuhlala emsileni umasipala ngenkulisa yezokusubatha
Alfred Ngubane Inkakha kwezokusubatha, uWillie Mtolo isiphakamise isandla yacela uZamo Nxumalo oyimeya yaseHarry Gwala District Municipality ukuthi kwakhiwe ngokushesha inkulisa yezokusubatha ehlongozwayo. UMtolo uphosele uNxumalo inselelo yokuthi angagcini ngokukhuluma ngomlomo kwabezindaba kodwa kwenzeke akuthembisayo. “Kumnandi […]
Ihlose izindondo zegolide ezintathu kwiComrades ikilabhu entsha
Alfred Ngubane Kuyacaca ukuthi ukusungulwa kweHollywoodbets Athletics Club kwenzelwe ukubeka ezokusubatha kuleli ezingeni eliphezulu ngempela. Lokhu kuvele engxoxweni yeMpempe nosihlalo wale kilabhu uMorgan Shandu othi balangazelele ukuthola amagolide amathathu kwiComrades Marathon. Kuzobe kungokokuqala abagijimi abangaphansi […]
Sekwenyuswe isibalo sabazogijima iComrades
May 9, 2022 Impempe.com
Alfred Ngubane Usihlalo weComrades Marathon uMqondisi Ngcobo uthi sebekhuphule isibalo sabasubathi abazongenela lo mjaho. Uthi lokhu bakwenze ngoba befuna ukunika abasubathi abafuna ukuzigijimela nje baqede umjaho hhayi ngoba bebheke ukuwina. Lesi sibalo sikhuphukele ku-20 000 […]